Odisha Tribal Tour- Tribes Village Tour India. Dana + 91-993.702-7574
Iwe unoziva here, 29% yehuwandu hweAdisha ndeyemarudzi? Kana iwe uri mumwe wevanhu, vanofarira kusangana nevanhu vatsva nekuwana tsika itsva, Sand Pebbles 'Odisha Tribal Tour ndiyo yako yekuenda kune imwe. Neva 62 madzinza akasiyana-siyana kuti aongorore, Odisha rwendo rwemarudzi rinotarisa pamitambo yekare, maitiro nemadzinza emarudzi. Rambai rwendo rwusinganzwisisiki kune nzvimbo dzemadzinza, neOudisha Tribal Tour, inopiwa neSandra Pebbles uye uve nemaonero aive pedyo nevevanhu venguva refu uye tsika. Kushandisa manheru, sezvo vanhu vemadzinza vanotamba vachienda kumitambo yeDhemsa kunogona kuva chiitiko chaicho cheupenyu. Iwe unogonawo kunakidzwa nemusika wevhiki nevhiki mumadzinza emarudzi neOudisha Tribal Tour yedu.
Gadzirira kugadzirira parwendo, nenzira yaunofunga iwe uye utarise tsika dzakagadzirwa nemagungano eOdhaisha yekare uye uve nechiitiko chinoshamisa uye chisingakanganwiki. Dzvinyirira pachako pane imwe nzvimbo inofadza iyo kwete chete ichakupa hupenyu hwehupenyu hwekufamba asiwo kuva chiitiko chekudzidza. Rwendo rweMudunhu reMunharaunda runobatanidza zvisikwa, nzvimbo, mhemberero, mhemberero, mitambo, tsika, unyanzvi, zvigadzirwa zvemhizha uye nhau. Nzvimbo duku yevanhu, avo vanozivikanwa semadzinza nguva dzose vanoziva nezvevanhu veguta guru, uye pamwe chete.
Sandhu Makungu'Odisha Tribal Tour inopa Odisha Tribal Tour Packages uye Odisha Village Tour iyo ichakugadzirira iwe parwendo rukuru.
Price: 180045 INR (13 Nights Program|Tour Code: 002)
Kusvika paBhubaneshwar Airport / Railway Station uye kutamira kune hotera. Masikati mashanyira kunzvimbo dzetemberi - Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani Temberi. Usiku huno kuBhubaneswar.
ZUVA 2: BHUBANESWAR - PIPILI - PURI
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kuenda kuPuri kushanyira Dhauli (Shanti Stupa), Hirapur (64 Yogini tempile), Pipli (Applique work work village) & Raghurajpur (Painting village). Panzira iyo inonakidzwa neKita-mifananidzo pamadziro edzimba. Usiku huno paPuri.
ZUVA 03: PURI - KONARK - PURI
Kutanga kwekutanga kweMangwanani Ishe Jagannath Temple, Gundicha Temple uye Loknath Temple. Masikati mashanyira kuSat Temple yeKonark (inonziwo Black Pagoda), Chandrabhaga Beach nemisha yekubata hove. Overnight at Puri.
ZUVA 04: PURI - CHILIKA LAKE - GOPALPUR
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwemafuro kuenda kuGopalpur neBarkul. Chilika Chidiki chichaonekwa munzira iri pedo neBarkul. Shanyira gungwa kuti uone varedzi vehove vari hove vachitsvaga ma prawns, mackerel uye marashi. Ramba uchienda kuGopalpur. Usiku huno paGopalpur.
ZUVA 05: GOPALPUR - TAPTAPANI - RAYAGADA
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaRayagada enzira vanoenda kunopisa sulfuri mutsime muTaptapani neTibetan Settlement musasa ku Chandragiri. Usiku huno paRayagada.
Mushure memangwanani emangwanani, shanyira Soura Tribal Market, ndokudzokera kuRayagada. Usiku huno paRayagada.
Mushure mokufamba kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemaTumudibandha kunoshanyira Kutia Kondh Tribes. Paaidzoka kushanyira pamusika wavo kuKotgarh. Panzira, kana nguva ichibvumira, shanyira Dhokra Casting uye Tribal Jewelery kugadzira nzvimbo. Usiku huno paRayagada.
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kushanyira Dongria Kondh Tribal misika ku Chatikona ndokuzoendesa ku Jeypore kuenda kune vashoma Desia Kondh ne Mali Mali Tribes munzira Usiku huno paJepore.
Mushure mokudya kwemazuva ekumhanya kuenda kuOndidelli kunoshanyira misika yakawanda yemunharaunda yeBonda Tribes uye unoshanyira vaGadabas & Didayee Tribes vane mavara. Usiku huno paJepore.
Mangwanani anowedzera kupararira kwemakambani emasango emasango akawanda eSaraparoja & Mali muKundli 65 KMs kunze kweSaabeda (inove mumusika wakaisvonaka kwazvo). Ipapo uende kuJiepore kuenda kuna Ishe Jagannath Temple uye Tribal Museum kuKoraput. Usiku huno paJepore.
Mushure mekudya kwekudya kwemanheru, fambai kuenda kuGupteswar kunoshanyira Ishe Shiva Temple uye vashoma Dhruba Tribes. Zvadaro mumusika wavo wevhiki nevhiki kuBaligaon. Usiku huno paJepore.
Mushure mekudya kwekudya kwemanheru, famba kuVisakhapatnam. Afternoon free on the beach. Usiku huno paVizag.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaSimhachalam. Zuva rezuva rakasununguka. Usiku huno paVizag.
Zuva 14: DEPARTURE
Mushure memangwanani emangwanani, endai kuVizag Airport / Railway Station kuitira mberi.
Munhu akawedzera ane mubhedha 20350 25850 31350 45650
Munhu akawedzera ane mubhedha 24000 31000 37600 54700
Hotel kuti ishandiswe: -
Bhubaneswar Hotel Sapphire Plaza / Safanana Hotel La Franklin / Safanana Hotel The Crown Mayfair Lagoon
Puri Hotel Naren Palace / Similar Empires / Kuzvikudza Ananya / Safanana Hans Co Co Palm / Safanana Mayfair Waves
1) Kana makamuri asingagoni kuwanika pamahotera ataurwa pamusoro apa, tichakupai mamwe mazita emahotera.
2: Pa Hotel Rayagada & Jeypore hapana hofisi yehotera uye yepamusoro. Ikoko kune Chete Chete uye bhajeti yeC AC / Mamwe Mapoka Akafanana.
Mutero wemitero uye mvumo yekubhadhara
02-03 Vanhu Dzire
06 Vanhu Innova
08-10 Vanhu Tempo Mufambi
Rimwe usiku AC inogara kuBhubaneswar nechingwa
Nenguva mbiri usiku AC kugona paPuri nechingwa
Rimwe usiku AC inogara kuGopalpur nechingwa
Nhatu usiku AC inogara kuRayagada nechingwa
Husiku huna usiku AC inogara kuJepore nechikafu
Nhasi usiku usiku AC kugadzikana kuVishakhapatnam nechingwa
Boating kuChilika lake Barkul
Chikumbaridzo chemari yeIndia chete.